Kuchave nekushomeka kuwanikwa kweiyo iPhone 7 pakuvhurwa kwayo | IPhone nhau
Izvi ndatoona: kushomeka kuwanikwa kweiyo iPhone 7 pakuvhurwa kwayo nekuda kwematambudziko ekugadzira
Nhasi tinokuunzira imwe yeiyo nhau kuti, se "mukubatwa munguva" kana "zuva renguruve", inodzokororwa gore rega. Kuwanika kweiyo iPhone 7 mumazuva ekutanga mushure mekuburitswa kwayo kunogumira. Ruzivo iyo yakabudiswa vhiki rino Nikkei uye haataure chingave chikonzero chekunonoka uku mukugadzirwa kweanotevera mafoni eapuro, asi ivo vanoti panogona kunge paine huwandu hwakawanda hwezvimwe zvinhu.
Kana tikatarisa kuti nhau idzi dzinodzokororwa gore rega rega, tinogona kunyumwira tofunga kuti i marketing marketing: kana isu tiri kufunga nezve kutenga iyo iPhone 7 kana iyo iPhone 7 Plus uye isu takaverenga kuti hakuzove kune wese munhu, kunyangwe kana chete kwemazuva ekutanga, zvingangoita kuti isu tichapedza kusarudza nekurova iyo "Tenga" bhatani kana mhanya kuApple Chitoro. Kunyangwe isu tisingakwanise kutonga kuti matambudziko ekugadzira ari chaiwo kana.
Hakuzove ne iPhone 7 yemunhu wese mumazuva ekutanga
Tinofungidzira huwandu hwemamiriyoni makumi manomwe nemana emamiriyoni eApple 74 akagadzirwa muhafu yepiri ya7, nepo paive nemamirioni makumi matanhatu nemana emamiriyoni eApple 2016s muhafu yepiri ya84. Pamwe pamwe nekumanikidza kwemitengo, isu tinotarisira kuti vazhinji vanopa rubatsiro muketani yezvinhu zveApple vanoona purofiti ichidonha kubva gore rapfuura kwegore rese.
Sezvandambotaura pamusoro, hatigone kutonga kuti iyi ndiyo nzira yekutengesa yavanoshandisa gore rega rega. Kana ndangariro yangu ikandishandira nenzira kwayo, ndinorangarira matambudziko senge anotevera:
Iyo chena iPhone 4 kana 4S yainonoka kusvika nekuti zvainge zvakaomera iyo nyowani nyowani ichagadziriswa.
La Nyaya Iyo iPhone 5 yaive isina kusimba zvekuti mamodheru ekutanga aifanira kugadzirwa nehunyanzvi.
Iyo iPhone 5s yaivewo nematambudziko ekugadzira, pamwe nekuda kweiyo Bata ID.
Iyo iPhone 6 / Plus yaive iyo kutanga kukura, saka pakanga painewo mashoma pakutanga.
Iyo iPhone 6s yakauya ne 3D Bata skrini uye naivowo vaifanira kungwarira muzvikamu zvekutanga.
Kana isu tichivimba nhepfenyuro uye tichitenda kuti matambudziko aripo zvechokwadi, dambudziko gore rino rinogona kunge riri mu makamera matsva, kunyanya kune malenzi maviri achave aripo muiyo iPhone 7 Plus kana yekuwedzera OIS mune diki saizi. Chero zvazvingaitika, zvinofungidzirwa kuti matambudziko ekugadzira achazotambudzwa nenyika dzekutanga dzinogona kutenga inotevera Apple mafoni emafoni, chimwe chinhu chavanokwanisa kuita munaGunyana 25.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Izvi ndatoona: kushomeka kuwanikwa kweiyo iPhone 7 pakuvhurwa kwayo nekuda kwematambudziko ekugadzira
Iwo akanakisa manomano ekuti uwane zvakazara muSafari paIOS (2/2)
Iyo Apple Watch 2 ichave iine 33% yakakwira bhatiri